Nagu Saabsan - Dezhou Grand Luminous Technology Co., Ltd.
Grand Luminous waxaa la aasaasay 2005, Ku tiirsanaanta asalka xoogga leh ee tignoolajiyadda photoluminescence ee Akademiyada Sayniska Shiinaha, waxaan gaarnay qalin dhammaystiran oo sax ah CAS (Dezhou) Innovation Park iyo Jaamacadda Shandong. Waxaan diirada saareynaa tikniyoolajiyadda photoluminescence dheer kadib iyo alaabada 'Baarista & Horumarinta, soosaarka iyo iibka.
Waqtiga xaadirka, iftiinka luminescent ee budada luminescent-ka, gaar ahaan budada huruud-cagaarka ah iyo buluuga buluuga ah ee buluuga ah, Noqoshada badeecaddeena udub-dhexaadka ah iyo badeecadaha ugu tartamayaasha badan, waxay ahayd heerkii ugu horreeyay ee duulimaadka qalabka luminescent-ka ee Shiinaha. Budadayada iftiinka leh waxay leedahay nuugid dhakhso leh, waqti luminescent dheer iyo nal iftiin xoog leh. Iyo isla cabirka walxaha yar yar, xoojinta iftiinka ayaa ugu fiican. Saamiga-qiimeynta waxqabadka ayaa ugu sarreeya Shiinaha.
Qalabkayagu kaliya ma dhalaalayo
Muxuu yahay Xeerkeenna FBA?
Agabkeenna iftiinka leh, Muuqaaladu waa is-iftiin mugdi ku jira Waa waxqabadka nalka leh ee aaladeena, shaqada mudada dheer ka dib, iyo astaamaha iftiinka joogtada ah ee iftiinka ka dib meesha isha iftiinka laga jaray
Waxaa loola jeedaa marka budadayada iftiinka leh lagu daro alaabada dhexdhexaadka ah ama alaabadayada nus-dhammaadka leh ee laydhka leh ee la adeegsado, ayaa badeecada la iftiimiyaa iyo dhibcaha iibka ayaa lagu darayaa.
1, dabeecadaheena sareeya waa wax qabad qaali ah, waxqabadka qaaliga ah laftiisa ayaa badbaadiya lacag.
2. Intaa waxaa sii dheer, iftiinka luminescent ee qalabkayaga luminescenterka (ama alaabada alaabada leh) ayaa ka fiican, xaddiga isugeynta (ama isticmaalka) ayaa la dhimay, wadarta kharashka ayaa sidoo kale la dhimay.
3. Isku habboonaanta. Farsamadeena khafiifka ah ee iftiinka leh waxay leeyihiin is waafajin wanaagsan waxayna yareynayaan heerka qashinka. Gudigayaga luminescent filimka wuxuu aad ugu dhowyahay adeegsiga dhamaadka isticmaalaha, si gaar ah loo habeeyay.
4, Way fududahay in la isticmaalo oo la siiyo macaamiisha xalka ugu fiican.
Awoodda soosaarka sii kordheysa iyo koritaanka joogtada ah ee cilmi baarista iyo horumarinta tikniyoolajiyadda photoluminescence, waxaan la kulannay baahiyaha kala duwan ee macaamiisha ku sugan daraasiin dalal ah oo loogu talagalay waxyaabaha loo yaqaan 'photoluminescent colors' iyo alaabada photoluminescent. Waxaa naga go'an inaan siino macaamiisha qalab tayo sare leh oo ku habboon, oo leh gabow lumineysa dheer, dhalaal xoog leh, dalabyo badan oo iswaafajiya, iyo bixinta xalka nidaamka mashruucyada luminecenterka macaamiisha.
Hadafkayagu waa inaan bixino alaabada ugu qiimaha badan iyo Xalka
Waxaan haynaa "Daacadnimo, jaangooyooyin, hufnaan, hal-abuur" fikirkayaga maareynta, iyadoo la raacayo shuruudaha Ururka Heerka Caalamiga ah, Maareynta Xaddidan, kor u qaadidda tayada tayada, bixinta alaabada ugu horreysa iyo adeegga ugu wanaagsan dhammaan macaamiisheenna.